Mila serasera… ifampitokisana | NewsMada
Mila serasera… ifampitokisana
Mahamenatra, mampalahelo… Mbola misy ihany ny tsy manaiky ny fisian’ny valanaretina Covid-19; eny, na efa ao anatin’ny andiany faharoa mahery vaika aza. Na tsy mahalala ny sasany, na tsy te hahalala. Tsy ampy ny fanazavana? Ao indray ny mody adala na minia adala: aretin’ny firenen-dehibe, hono; aretin’ny mpanankarena. Tonga hatramin’ny hoe aretina politika: fitadiavam-bola, paipaika amin’ny fitantanana na ny fitondrana…
Efa vonto sy donton’ny politika? Tsaraina ho misy ambadika avokoa izay mitranga sy atao rehetra. Tsy ampy ny fifandraisana eo amin’ny vahoaka ifotony sy ny tomponandraikitra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga? Vokany, saro-toerana mbamin’ny fifampitokisana. Izay koa no fositra mahatonga ny fanaratsiana sy ny fankalahana aza fa tsy vitan’izay fanahiana. Aretina avy no ndeha hitadiavana na hiadiana tombontsoa manokana, sanatria?
Mila atao totoafo ny fanazavana sy ny fanentanana? Ara-pahasalamana feno sy tanteraka no anaovana izay fa tsy antony politika, ohatra, na mety hiheverana izany kely akory. Mila olona to teny izany: azo atokisana, mijery lavitra… Amin’ny sehatra sy ambaratonga rehetra izay mba hifameno fa tsy hifamono izay lazaina. Na sanatria mety handreraka, na hankaleo, na hahasorena, na hanafintohina, na handratra, na hanakivy, na hanakorontana…
Tsy tongatonga ho azy ny fisian’ny malain-kisahirana amin’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao; eny, na efa mby amin’ny andiany faharoa izao aza: mahery vaika kokoa, haingam-pifindra, malaky mihombo… Nefa misy ihany tsy rototra, ny tsy miraharaha, ny tsy mivaky loha… Izany, ohatra, no hita tany Atsinanana tany tamin’ny fetin’ny Paska teo. Iza no omen-tsiny raha mirongatra be ny aretina? Toy izao iainana izao…
Samy mizaka ny voka-dratsin’ny tandrevaka ny rehetra fa tsy manavaka na mifidy olona ny aretina. Izay no iambenana sy itandremana. Raha ilaina, mifampahatsiahy sy mifanitsy mivantana aza. Mila serasera sy fifampitokisana ny iray vatsy sy iray aina, fa tsy samy manao izay saim-pantany.
Collaboration artistique :Antwan Dago signe dans «La Big Tape» 20/04/2021
6e art: «Danse pour tous» privilégie le partage 20/04/2021
Lutte contre le covid-19: sensibilisations à la base à Betroka 20/04/2021